सन्दीपमाथि कर छलीमा अनुसन्धान ? « Drishti News – Nepalese News Portal
सन्दीपमाथि कर छलीमा अनुसन्धान ?
२६ कार्तिक २०७६, मंगलबार ९ : ५८ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २६ कात्तिक । नेपालका सर्वाधिक सफल क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेले करिब ६ करोड रुपैयाँमा भव्य बंगला किनेका छन् । करिब २० वर्षकै उमेरमा आफ्नै कमाईबाट उनले काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा बंगला किनेका हुन् ।
सन्दीपको यो सफलता निकै लोभलाग्दो छ र सबैले प्रशंसा गरिरहेका छन् । तर, नयाँ बंगला खरिद गरेसँगै उनमाथि समस्या समेत थपिएको छ । उनी करको लफडामा पर्ने देखिएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले उनको आय र करको विवरणमाथि छानबिन थालेको छ ।
६ करोडमा घर खरिद गरेको समाचार आएपछि विभागले छानबिन थालेको हो । स्रोतका अनुसार आयको तुलनामा निकै थोरै मात्र कर तिरेको पाइएपछि छानबिन थालिएको छ ।
आर्थिक बिधेयक २०७६ अनुसार अविवाहितको हकमा ४ लाख रुपैयाँसम्म १ प्रतिशतको दरले वर्षमा ४ हजार रुपैयाँसम्म कर तिरे पुग्छ । ४ लाखदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा १० प्रतिशतको दरमा थप १ लाखको १० हजार गरी १४ हजार तिर्नुपर्छ । ५ लाख रुपैयाँदेखि ७ लाख रुपैयाँसम्मको हकमा २० प्रतिशतका दरले थप ४० हजार गरी ५४ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
जसअनुसार उनले एक वषैमै करिब ४० लाख रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, उनले थोरैमात्र कर तिरेका छन् ।
यो वर्ष त उनको कमाई करिब तीन करोड नाघ्ने देखिएको छ । टि टेनदेखि अष्ट्रेलियाको बिग ब्यास तथा इंल्याण्डको एक प्रतियोगितामा समेत उनी छानिएका छन् ।
विश्वका धेरै चर्चित खेलाडीहरु करको लफडामा परेका छन् । मेसीदेखि रोनाल्डोसम्मलाई यस्तो कसुरमा सजाय भएको छ । नेपालमा सबैभन्दा धेरै कमाउने सन्दीप पनि करको लफडामा परेका छन् ।
यद्यपि, उनले कमाई लुकाउन बैंकबाट कर्जा समेत लिएका छन् । तर, पनि गम्भीर छानबिन भए उनीमाथि कारबाही हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।